horror Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by unesh कार्तिक ३, २०७७
written by unesh
सन् १९७९ मा भएको इरानियन क्रान्ति पछि लथालिङ्ग भएको इरान सरकारको फाइदा उठाउँदै सन् १९८० को २२ सेप्टम्बरमा इराकले इरानमाथि हमला गर्यो ।
सो युद्धका पानाहरू पल्टाउँदै सुरु हुन्छ ‘अन्डर द स्याडो’ । ८० को दशक, युद्ध सकिएको छैन । ‘शिदे’ (Narges Rashidi), पूर्व मेडिकल विद्यार्थी, आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छे । खुल्ला झ्याल भएको अफिसमा बसेर ऊ प्रधानाध्यापकसँग कुरा गरिरहेकी छे । आफूले रोजेको बाटोको पछाडिका कारण ऊ प्रधानाध्यापकलाई भन्छे । त्यही समय बाहिर बम पड्किन्छ र धुवाँका मुस्लाहरू उठ्छन् । प्रधानाध्यापक भन्छ- ‘हरेक गल्तिको परिणाम हुन्छ ।’ उसको पढाइ रोकिनु पछाडि उसले रोजेको बाटो हो । त्यति नै किन ? यो युद्धको कारण पनि उसले रोजेकै बाटो हो भन्ने कुरामा प्रधानाध्यापक विश्वस्त देखिन्छ । अन्ततः विगतमा उसले गरेको राजनैतिक फैसलाको कारण उसले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन पाउँदिन ।
pic 1; from the movie
इराक-इरान युद्धको चपेटा सहिरहेको इरानको राजधानी तेहरानमा ‘शिदे’, ‘इराज’ (Bobby Naderi) र ‘दोर्सा’ (Avin Manshadi) गरि तिनजनाको एक परिवार बस्छ । युद्धको त्रास, सपनाको त्याग र आमाको निधन, यी सबै कुराहरूले शिदेको निद्रा छिनेको छ । आँखा वरिपरि कालो बादलझैं माडरिएको कालो घेरा (डार्क सर्कलस्) उसको अभिन्न अङ्गझैं प्रतित हुन्छ । उसै पनि निद्रामा हिँड्ने इतिहास छ उसको । उसकी छोरी ‘दोर्सा’लाई पनि निद्राको समस्या छ । दुःस्वप्नले ग्रसित छे दोर्सा । इराज, शिदेको पति, जो डाक्टर हुुन्छ, कामको शिलशिलामा तेहरान छोडेर जानु पर्ने हुन्छ । जानु भन्दा अगाडि ऊ शिदेलाई आफ्नो बुबाआमाको घरमा जान आग्रह गर्छ तर शिदे मान्दिन, त्यहीँ बस्ने जिद्दी गर्छे र बस्छे पनि ।
चलिरहेको युद्धका कारण, एक-एक गरेर सबैले शिदे बस्ने भवन छोड्न थाल्छन् र अन्त्यमा मात्र आमा-छोरी त्यस भवनमा बाँकी रहन्छन् । उनीहरूलाई अदृश्य केही चिज (जिन)ले सताउन थाल्छ । असामान्य दृश्यहरू देख्न थाल्छिन शिदेले । दोर्सा पनि नदेखिने महिलासँग कुरा गर्न थाल्छिन् । आमा छोरीबिच मनमुटाब बढ्न थाल्छ । कसरी उनीहरू त्यस जिनबाट बच्छन् ?
‘अन्डर द स्याडो’, जिनबाट बच्ने प्रयास गरिरहेका आमा-छोरीको कथा मात्र होइन । तत्कालीन इरानको कथा हो यो । ‘युद्ध र मृत्युको छाँयामा रहेको इरान’ भन्ने बिम्ब बोकेको छ शिर्षक स्वयंले । खतराको संकेत दिने साइरनको आवाज सुन्नासाथ बेसमेन्टमा भाग्दै जानु, रातभरि सुत्न नसक्नु, रिसाउनु..यो सबै सामान्य जस्तै हो शिदेको जीवनमा तर भित्रभित्रै ऊ ग्रसित छे । देशमा भइरहेको युद्ध, आमाको निधन, चक्नाचुर भएको सपना ! यस्तोमा निद्रा नपर्नु मनासिब प्रतित हुन्छ ।
कसैलाई आफ्नो वशमा नपारुन्जेल जिनहरू हावाको माध्यमले हिँड्ने कुरा शिदे बस्ने भवनकी घरबेटिले शिदेलाई बताउँछे । जिन भय हो वास्तवमा, युद्धको र मृत्युको । मानिसक असन्तुलनको परिणाम हो जिन । कति नै समय लाग्छ र भयलाई कसैमा हावी हुनलाई ? केही क्षण ? केही पल ?
शिदेले पुस्तकमा हेर्छे । त्यहाँ लेखिएको हुन्छ‍- “जहाँ भय र तनाव हुन्छ त्यहाँ हावा बहन्छ ।” युद्धको बिचमा भएको देशमा कतिखेर मिसाइल खस्छ ? मरिन्छ वा बाँचिन्छ जस्ता कुराहरूको भयमा बाँच्नु भन्दा ठूलो भय र तनाव के हुन सक्ला ? किताब पढ्दै गर्दा हामी सुन्न सक्छौँ, सरसर बगिरहेको हावाको आवाज । ऊ डराइरहेकी छे । ऊ तनावमा छे ।
pic 2; from the movie
आफूलाई प्राण भन्दा प्यारो केही कुरा जिनले लगेको खण्डमा उनीहरूबाट भाग्न सम्भव नहुने कुरा पनि घरबेटिले शिदेलाई बताएकी हुन्छे । दोर्साको गुडिया हराएको पनि हुन्छ । ऊ यो सबै कुरामा विश्वास गर्न चाहन्न तर भइरहेको घटनाक्रमले गर्दा उसको मन भयभित छ । ऊ दोर्सालाई हकार्दै भन्छे –“जिनहरू केही हुँदैनन्” । ऊ यो कुरा दोर्सालाई भन्दा आफैलाई भनिरहेकी हुन्छे ।
त्यो गुडिया हात नपरेकाले चाहेर पनि उनीहरू निस्कन सक्दैनन् । टुक्रिएको गुडिया फेला पर्छ त्यहाँ, जहाँ शिदेले आमाले दिएको किताब जतनका साथ राखेकी थिइन् । तर किताब भने हराएको हुन्छ । पछि जब उनीहरू जिनबाट उम्किएर निस्कन्छन् दोर्साको गुडियाको टाउको र शिदेको किताब भवनमै छुट्छ । उनीहरू त्यहाँ बाट भागे तर उनीहरूले जिनबाट छुट्कारा पाएनन् । उनीहरूले भयबाट छुट्कारा पाएनन् । तेहरानमा होस् वा अन्य कुनै गाउँमा युद्धको डोब त जताततै हुन्छ, देश भरि असर परिरहेको हुन्छ । उनीहरू त्यो सत्यबाट भाग्न सक्दैनन् ।
pic 3; from the movie
झ्यालका सिसा नफुटुन भनेर तिनलाई टेप लगाइएको छ, ‘क्रस’ आकरमा, जसलाई हामी चलचित्रमा बारबार देख्न सक्छौँ । ‘क्रस’ले यस चलचित्रको ‘मोटिफ’को काम गर्छ । ‘द डिपार्डेट’मा पात्रहरूको मृत्युलाई पूर्वचित्रण गर्न ‘क्रस’को ‘मोटिफ’ प्रयोग गरिएको थियो । यहाँ पनि मृत्यु र खताराको बिम्बको रुपमा सो ‘मोटिफ’लाई प्रयोग गरिएको छ । एउटा दृश्यमा ‘टाँसिएको त्यो टेपको छाँया शिदेको ठिक मुखमा पर्छ । उसलाई खतरा छ । उसको परिवारलाई खतरा छ ।
pic 4; from the movie
घरमा डीभिडी राख्न नपाइने हुँदा हुँदै शिदेको घरमा डीभिडी छ । डीभिडीमा व्यायमका भिडियो लगाएर शिदे व्यायम गर्ने गर्छे । यहाँसम्म कि निद्रा नलाग्दा पनि उसको काम यही हुन्छ, पसिना निस्कने गरी ऊ व्यायम गर्छे, झ्याल लगाएर, पर्दा लगाएर, बाहिरको दुनियाँबाट लुकेर ।
त्यसबखतको इरानमा महिलाको स्थितिको बारेमा पनि फिल्मले बोलेको छ । पुूरै भवनमा कार चलाउने शिदे एक मात्र महिला भएकाले ग्यारेजको गेटको ढोका राम्रोसँग बन्द नगरेकाले खिया लागेको र गेट खओल्न बल लगाउनु पर्ने दोष शिदेको टाउकोमा पर्छ । भवनको ढोकामा एउटा दृश्यमा उसको घर मर्मत गर्ने मान्छे आउँछ । पाखुरा देखिने लुगा लगाएकी हुन्छे शिदेले । ढोका खोल्नु अगाडि उसले आफ्नो जिउलाई ढाक्छे र सलेले टाउको छोप्छे । यहाँ सम्म कि आफ्नो र बच्चाको ज्यान बचाएर भाग्दा हिजाबले टाउको नछोपेको आरोपमा ऊ गिरफ्तार हुन्छे ।
बाबक अन्बरीको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘अन्डर द स्याडो’ एकदमै जतनका साथ बनाइएको चलचित्र हो । सिनेमामा घरभित्र घटिरहेका भयानक अलौकिक घटनाहरू घर बाहिर भइरहेको घटनाका अगाडि केही होइन जस्तो प्रतित हुन्छ । कसिलो पटकथा र राम्रो छायांकन भएको यो फिल्म देखिरहेको ‘हरर’ फिल्म भन्दा भिन्न छ । रंगीबिरंगी परिवेशमै पनि भय उतपादन गर्न सकिन्छ भनेर ‘किट फ्रासेर’को छायांकनले सावित गरेको छ । सिनेमामा ‘CHEKOV’S GUN’ को प्रयोग कसरी गरिन्छ भनेर कसैलाई उत्सुकता छ भने, थाहा पाउनलाई ‘अन्डर द स्याडो’ हेर्दा हुन्छ ।
कार्तिक ३, २०७७0comment